Hechino chinoyevedza vhidhiyo yaFatau nemwana wake achigadzira iyo buzz pawebhu - Tamban RELAY
Hechino chinoyevedza vhidhiyo yaFatau nemwana wake achigadzira iyo buzz pawebhu
By bryamangwanabe On Juil 31, 2020
Mukoma waGims akarova webhu zvakaomarara nekuburitsa iyi China, Chikunguru 30, vhidhiyo inodakadza yaakaimba nemwana wavo mudiki wemwedzi mina.
Babaju vanga vachifamba pamusoro pamakore mumavhiki apfuura ... kana kudaro pane mvura! Panguva iyo zita rake Grand bain, rakagadzirwa se duet naNinho, rakatyora zvinyorwa kubva pakatanga muna Chikunguru 19 pamapuratifomu ese anotenderera, clip yavo inotarisirwa zvakanyanya yakaburitswa iri China, 30 Chikunguru.
Mhedzisiro yacho haina kuodza moyo uye inoratidza yakakura bhajeti dhizaini iro ratove kuita mazana mana ezviuru maawa mumaawa mashoma. Tinogona kuona babaju vachibuda mumvura yakadzika mukambani ye ... shark! Nekuti iripo "Vazhinji vane godo, shanje dzakawandisa mumugumo wakadzika", zvinoenderana namashoko erwiyo.
Asi pakupera kwaJuly, kwaingova kutanga kwegore idzva rechikoro kumuimbi uyu anga achigadzirira dambarefu idzva uye nekubatana pachiitiko nemuimbi weAmerica Chris Chris. MunaJune 2021, muimbi akarongerwa rwendo rwunosanganisira isingasviki misi miviri kuParc des Princes muParis.
Nguva diki yekudzikama
Zvisinei neiyi purogiramu yakabatikana, Babaju vachiri kuita nguva yekuchengeta mhuri yavo yechidiki. Uyezve, anoibvisa nekudada nemazwi erwiyo:
"Baby, kuruoko rwangu rweruboshwe ndine daimondi yaunofanirwa." Tarisa uone mumvuri unozoshandura hupenyu hwako. Nekuti hupenyu hwako hwave nani neni. Hauna kusahadzika here, ndiudze kuti mangani zeros anodiwa kuti akushongedze uye ini ndigokupa iwe ”.
Mumwe wake akabereka mwana wavo wechipiri, mukomana mudiki, musi waApril 3, 2020. Babaju vanga vatove baba vanofara veMaamou, mhodzi yembeu yakazvarwa muna 2017. Pa Instagram musi uyu China, Chikunguru 30, babaju vakaburitsa mifananidzo yemumwe wavo hama pavakanga vari mundege yakavadzosa kuParis, sezvaakaratidza mune iyi nyaya.
Asi iri pamusoro pevhidhiyo yose pamusoro pake, mwanakomana wake ari pamabvi ake, achiimba kusvika kumhando yaMaria Maria naCarlos Santana, uyo pasina mubvunzo anogamuchira muchindwe weiye akanaka.
Iye mukoma mudiki waMaître Gims akazvinyatsozvivakira nzvimbo mumoyo yevashandisi veInternet avo varatidzira mazana nemazana evari mumurazvo wemashoko ake vhidhiyo ichangoburwa. "Akanaka [akanaka]", vakapfupisa mumwe wavo mushe. Dadju vakangokunda pamusoro pevateveri vake.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://afriqueshowbiz.com/une-video-de-dadju-avec-son-bebe-fait-le-buzz-sur-la-toile/
American rapper Snoop Dogg anotenderera pamusoro peEmemem
Heano Izvo Murume waNicki Minaj Anobvunza, Kumirira Muedzo